बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा कहाँ पाउन गर्न? | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा कहाँ पाउन गर्न?
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 06/03/2020)
यात्रा परम साहसिक छ तर तपाईं यो निःशुल्क सामान गर्नुपर्छ, layovers लागि विशेष वा यदि बस जर्मनीको मध्ये एक मुक्त दिन लोकप्रिय शहर. हामी तपाईं को लागि आफ्नो मुख्य शहर को तीन जर्मनी मा बायाँ सामान स्थानहरू लागि आवश्यक सबै जानकारी छ, बर्लिन, म्यूनिख, र हैम्बर्ग.
तपाईं उपस्थित हुनुहुन्छ कि म्यूनिख Oktoberfest, बर्लिन ब्रेन्डेनबर्ग गेट श्रद्धा खडा वा हैम्बर्ग मा Reeperbahn को पार्टी अनुभूति मा reveling, यी आफ्नो सामान राम्रो तपाईं अन्वेषण गर्दा को हेरचाह हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सजिलो र सबै भन्दा सुविधाजनक तरिकाहरू छन्.
बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा: बर्लिन
Tegel मा हवाई अड्डा, तपाईं टर्मिनल एक बाँया सामान स्थान फेला हुनेछ र देखि हरेक दिन खुला5छु 10:30 बजे. भुक्तानी हुनेछ मूल्यहरु देखि भिन्न हुनेछ € 7.20 गर्न € 9.90 र आफ्नो झोला को आकार मा निर्भर गर्दछ. भण्डारणको लागि समय को लम्बाइ असीमित छ.
मा Schonefeld हवाई अड्डा, तपाईं टर्मिनल डी आगमन मा बायाँ सामान स्थान पाउनुहुनेछ. आफ्नो घन्टा शुक्रवार गर्न आइतबार छन्, बाट 7:30 छु 11:30 बजे र शनिवार देखि 8 छु6बजे. मूल्यहरु दायराबाट €4हात सामान लागि €6र €7सामान्य जाँच सामान लागि € 10.
बायाँ सामान स्थान मा रेल स्टेशन
सुविधाको रेलवे स्टेशन तपाईं लागि तिनीहरूले खुला छ 24 घण्टा एक दिन, सात दिन एक हप्ता. केन्द्रीय ट्रेन स्टेशन (Hauptbahnhof) जहाँ तपाईं लकर पाउनुहुनेछ र यो कार पार्क मा क्षेत्र सी मा मुख्य भवन बाहिर स्थित छ छ.
को लकर को आकार मा निर्भर गर्दछ तपाईंलाई, तिनीहरूले बीच €4र €6एक दिन खर्च र अधिकतम भण्डारण अवधि छ 72 घण्टा. तपाईं एक बायाँ सामान कार्यालय भ्रमण रुचि भने, त्यहाँ एक देखि दैनिक खुला छ6छु 10 बजे र यसको बारेमा प्रति वस्तु € 5.
लकर भण्डारण अन्य स्टेशन Alexanderplatz समावेश, Ostbahnhof, Potsdamer Platz र Zoologischer Garten. सजिलो जर्मनी मा बायाँ सामान स्थानहरू पत्ता लगाउन!
बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा: म्यूनिख
म्यूनिख हवाई अड्डा तपाईं शहर गएर गर्दा सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ. टर्मिनल मा सेवा केन्द्र 1 खुला 24 घन्टा र त्यहाँ टर्मिनल मा दोस्रो स्थान छ2तर खुलने छन्5दैनिक मध्यरात छु.
तपाईं बीच €5र € 10 भुक्तानी गर्नेछ, आफ्नो सामान साथै यसको सामग्रीहरूको आकार आधारमा. यस विमानस्थलको जाँच’ वेबसाइट अघि तपाईं जर्मनी मा बायाँ सामान स्थानहरू लागि नवीनतम जानकारी र अन्य विमानस्थलको लागि यात्रा.
बायाँ सामान स्थान म्यूनिख मा रेल स्टेशन
सामान म्यूनिख गरेको सेन्ट्रल स्टेशन भण्डारण लागि एक समीर हुनेछ. त्यहाँ लकर को एक प्रशस्त छ र त्यहाँ सजिलै तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन संकेत हो. एक मानक लकर तपाईं खर्च हुनेछ बारेमा €4प्रति दिन र ठूलो लागि, सुट-मामला आकारको लकर बारेमा €6दैनिक. एक 72 घण्टे प्रतिबन्ध सीमा तथापि छ.
अन्य धेरै स्टेशन नै सुविधा संग सज्जित छन्.
बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा: हैम्बर्ग
आफ्नो मात्र विकल्प छ Hamburg Airport. बायाँ सामान कार्यालय टर्मिनल छ 2, स्तर 1 प्रस्थान बाट आइतबार यसलाई गरेको खुला सोमवार 4:30 छु 11 बजे. तपाईं बीच €5र € 25 भुक्तानी गर्नेछ, आकार सबै निर्भर. ठूला आफ्नो सामान, उच्च आफ्नो शुल्क, र विमानस्थल पनि प्रति वस्तु एक समय प्रशोधन शुल्क रूपमा €3शुल्क.
तपाईं सीमित समय फ्रेम लागि यहाँ आफ्नो सामान भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ यसको सबै भन्दा राम्रो र अगाडी तपाईंको आगमन अघि जाँच गर्न. तपाईंले पहिले यात्रा गर्न सक्छन् धेरै जानकारी भेला.
युरोप मा रेल स्टेशन को धेरै संग रूपमा, तपाईं जो सबै सजिलै पहुँच र खुला छन् लकर संग भाग्य मा हो 24 घण्टा एक दिन. औसत लागत छ €5दिन र कुनै आकार प्रतिबंध हो.
निजी सेवा: को 'Airbnb' सामान लागि
त्यहाँ Airbnb को कि धेरै समान एक प्रणाली रोजगार भनेर केही कम्पनीहरु, मात्र सामान लागि. तपाईं केवल एक स्थान खोजी गर्न आवश्यक छ, आरक्षण र त तपाईं को लागि सबै भन्दा सुविधाजनक छ भनेर प्रमाणित स्थानमा आफ्नो बैग छोड्न. यो जर्मनी बाँकी सामान स्थानहरू फेला को सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
बीमा मूल्य मा समावेश गरिएको छ र तिनीहरूले कम्पनी बाट कम्पनी गर्न भिन्न. तपाईं पनि आफ्नो बैग सुरक्षित हात छन् भनेर मन को शान्ति हुनेछ.
यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र एकदम reasonably मूल्य हो कि एक धेरै सम्मानित भण्डारण सेवा छ. तपाईं प्रति प्रति दिन झोला को €5समतल दर भुक्तानी गर्नेछ. आफ्नो झोला पनि अधिक € 800 को लागि बीमा छ. यो सबै मूल्य समावेश गर्नुपर्छ.
तपाईं बस तपाईं नजिकै एक स्थान को लागि आफ्नो वेबसाइट खोज. तपाईं त आफ्नो विशिष्ट 'StashPoint' चयन गर्न सक्षम हुनेछ र तपाईं आफ्नो बैग बन्द ड्रप जब, आफ्नो आरक्षण आफ्नो पाहुना देखाउन र क्रमबद्ध हुनुहुन्छ!
यो समान सेवाहरू Nannybag र BagBnb समावेश. यी सेवाहरू युरोप भर उपलब्ध वास्तवमा छन् र सजिलै जर्मनी लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ.
यात्रा र सामान भण्डारण गर्दा आवश्यक छ, यसलाई सधैं राम्रो तयार गर्न हो. डबल सबै विवरण जाँच र तपाईं को लागि सुविधाजनक छ कि एक समाधान खोज्न र तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ. चाहे त्यो विमानस्थलको छ, स्टेशन तालिम वा अनलाइन निफ्टी निजी सेवाहरू चलाइ, यो सबै उपलब्ध बटन को क्लिक मा छ. खुसी सामान र आफ्नो रेल टिकट र प्रयोगमा केही पैसा बचत एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा कहाँ पाउन गर्न?” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
leftluggage म्यूनिख trainjourney Tranride रेल स्टेशन रेल यात्रा travelberlin travelgermany ट्राभलह्यामबर्ग
10 सबैभन्दा आकर्षक रेल स्टेशन मा स्पेन